Remix Mini: ilay tetikasa mikendry ny hitondra Android amin'ny PC amin'ny fomba voafaritra | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | hafa
Mpampiasa maro no mila rafitra fandidiana mba hanatanterahana ireo asa tena lehibe indrindra. Mba hijerena ny mailaka, ireo tranonkala Internet ankafizintsika, mijery sarimihetsika na mihaino mozika, dia tsy voatery mila solosaina matanjaka be isika, na Operating System sarotra.
Ankoatry ny Windows, OSX, UNIX, BSD (sy ny derivatives) ary ny GNU / Linux, dia misy karazana rafitra miasa hafa izay nitombo hatramin'ny nahazoan'ny Smartphone, miaraka amin'ny Android sy iOS izay malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Android, izay misokatra indrindra amin'ity tranga ity, dia nalaina mba hamoronana tetikasa sasany ahafahantsika mihazakazaka azy ivelan'ny telefaona finday. Ao amin'ny FromLinux sahady efa niresaka momba izany isika, ary toy izany koa ry zalahy avy Tecnología.netamin'ny ity lahatsoratra tena tsara ity.
Ny kely kokoa dia mety ho bebe kokoa. Ity no teny filamatran'ny tetikasa vaovao izay ao anatin'ny dingana Crowfounding in Kickstarter, ary mampanantena ny hanome antsika solosaina misy Android 5 amin'ny toerana misy anao, miaraka amina endrika kanto sy teknolojia vaovao, na farafaharatsiny mahafinaritra kokoa ny mampiasa azy. Ho an'ity dia mampiasa fork antsoina hoe Remix OS izy ireo.
Raha ny marina, amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny mividy Remix Mini amin'ny ambaratonga fidirana amin'ny alàlan'ny Kickstarter, izany hoe, kely kokoa ny toerana fitahirizana ary kely kokoa ny RAM amin'ny $ 30 dolara, satria izy ireo dia nanolotra kinova $ 20 izay efa namidy.
Amin'ny lafiny mampifandray ny Remix Mini dia toa misy fitaovana amin'ny zava-drehetra, hoy ireo seranana WIFI, Bluetooth, LAN ary USB. Ireo fanjifana angovo mahavelom-bolo rehetra izay azo ihomehezana.
Heveriko fa tetikasa tena mahaliana izy io, indrindra ho an'ireo mpankafy Android izay afaka manana amin'ny findainy sy amin'ny solosaina ankehitriny, mankafy ireo tombontsoa sy serivisy omen'i Google ho an'ny rafitra fiasa. Raha jerena fa ny ankamaroan'ny safidy ahafahana mihazakazaka na maka tahaka ny fampiharana Android dia mifototra amin'ny fanitarana na amin'ny tranokala, araka ny eritreritro Remix Mini vokatra tsy manam-paharoa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Remix Mini: ilay tetikasa mikendry ny hitondra Android amin'ny PC amin'ny fomba voafaritra tsara
Francisco Medina dia hoy izy:
Aza adino ny android x86 🙂 dia tetik'asa hafa ihany koa izay mivoaka any, fa izy ireo koa dia misy zavatra tokony hososina 😀
Valiny tamin'i Francisco Medina
raha izay ilay "birao" dia mahavariana.
Nampiasa Android x86 aho ary somary tsy mahazo aina izany, noho ny scrotum, fa ny fampiharana offimatic sy ny hafa ananan'ny Android dia tena ahazoana aina amin'ny PC.
Mamaly an'i clown
Birao no tiako holazaina, androany dia voadona ny dislexia-ko.
Niditra ny pejin'ny tetikasa aho ary hitako ilay takelaka, tsy misy tokony hitsiriritra ny an'ny MS
Azonao antoka ve izay lazainao ?.
Manana takelaka MS sy iray misy Remix OS hampitahanao ianao….
... hatramin'ny nanomezako ny hevitro, hevitra.
Anisan'ireo fahitalavitra Android ratsy tarehy sy manahirana be dia be ity fork an'ny PC ity ary hatreto dia tsara tarehy kokoa noho ny Lollipop ny famolavolana ary azo ampiasaina amin'ny mpanara-maso. Vokatra tsara.
Heveriko fa amin'ity gadget ity dia tsy mandeha ny foto-kevitry ny "root", "xposed" sy ny toy izany, sa tsy izany?
raalso7 dia hoy izy:
Enga anie isika hanana birao tahaka izany amin'ny Linux
Mamaly an'i raalso7
Manana birao tsara in-3 tsara kokoa amin'ny linux izahay
Resaka fakana birao sy fanovana azy io araka izay itiavany azy.
Anjarako ve sa toa itovizany amin'ny gnome3?
Ity XD lehibe ity.
ron-kena dia hoy izy:
Raha ny momba ny haitao finday amin'ny Linux, tsy misy fandrosoana, tsy misy mahaliana, tsy afaka mamolavola ny rindran-damina ho an'ny kaonferansa audio sy video eo noho eo akory ianao.
Mamaly an'i broth
Drassill dia hoy izy:
Hatreto dia tsara bika izy. Izy io dia manana interface tsara manintona sy famolavolana fikirakirana kanto ... Ilaina ny mijery raha toa ny endriny madio na ny tena tetik'asa azontsika hararaotina.
Valiny tamin'i Drassill
Te hanana fotoana hanandramana aho misaotra
Tafavoaka ny lesoka ianao: «Remix Mini mahita fa vokatra miavaka.» na diso aho.
Phabricator: Sehatra iray manontolo amin'ny fampandrosoana ny lozisialy